Xog ku saabsan qarax caawa ka dhacay Galkacyo iyo tirada dhimashada & dhaawaca.
Puntlandtimes (Galkacyo)-Xaaladda magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ah mid degan kadib markii salaaddii maqrib inyar kadib bam-gacmeed lagu tuuray ciidamo katirsan kuwa ammaanka Puntland oo ku sugnaa aggaa Xera-daraawiish.
Qaraxaan oo la sheegay inuu ahaa mid gacanta laga tuuray ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow maqaayada lagu magacaabo (Caways) oo ku taala Ex- xero Daraawiish, halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka qayb qaadanayey sugidda ammaanka magaaladda Galkacyo.
Inta la xaqiijiyey hal ruux ayaa ku geeriyoodey qaraxaasi iyadoona ay dhaawacyo fududi ka soo gaareen labo kamid ah ciidanka ammaanka Puntland, inkastoo aysan saraakiisha ammaanku faahfaahin ka bixin qaabka ay wax u dheceen.
Ciidanka ammaanka ayaa isku gadaamey qaabka ay wax u dheceen iyagoona sameeyey howlgallo ay ammaanka ku xaqiijinayaan, waxaana falkaasi ku soo beegmayaa xilli uu muddooyinkii ugu dambeeyey soo hagaagayey ammaanka magaalada Galkacyo.